साताको तस्वीर : आकर्षक गन्तव्य कारीकोट ! – ebaglung.com
साताको तस्वीर : आकर्षक गन्तव्य कारीकोट !
२०७३ फाल्गुन १९, बिहीबार २३:५३	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
नवनिर्मित कारीकोट मन्दिर ।
बागलुङ नगरपालिकाका माथिल्लो भागमा रहेका विभिन्न पाँच कोटहरु मिलाएर पन्चकोटधाम नामाकरण गरी सिममा धार्मिक पर्यटकीय स्थल निर्माण गर्ने कार्यको थालनी सँगै त्यसको केहि माथी धुरीमा अवस्थित ऐतिहासिक, पूरातात्विक एवं धार्मिक महत्वको कारी(र्की)कोट आकर्षक गन्तव्यको रोजाईमा परको छ । सुन्दर, शान्त र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण कारी(र्की)कोटमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरुको रोजाईमा पर्नुका थुप्र कारणहरु छन् । त्यसमध्य सबभन्दा पहिलो कारण त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य नै हो । अग्ला सल्लाका बोटहरुबीचमा उभिएर हिमश्रुंखलाहरुको दृश्यावलोन अर्को आकर्षण हो । युवाहरु सल्लेपिरलमाथी लडीबुडी खेल्दै प्राकृतिक सौन्दर्यका वीच सेल्फीमा रमाउदै गरेका दृश्यहरुले कसको मन नलोभाउला ?
कारीकोटबाट देखिने पन्चकोट धाम ।
बागलुङ बजारबाट देखिने कारीकोट र पन्चकोट (सिम)
कारी(र्की)कोटबाट माझकोट, संसारकोट, बिहुँकोट पन्चकोट लगायत सबैकोटहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ । पन्चकोटको विहंगम दृश्य हेर्न पनि कारी(र्की)कोट उपयुक्त छ ।
कारीकोटबाट देखिने संसारकोट र माझकोट ।
कारी(र्की)कोट भन्दा माथी सिरानमा रहेको संसारकोट र त्यसदेखी केहि तलको माझकोट (तस्वीर)का साथै पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारै दिशाका बाख्लो मानववस्तीले भरिएका हरिया डाँडा पाखा, पखेरा, खोल्साखोल्सीहरुका सुन्दर दृश्य एकै फन्कोमा देख्न सकिने हुनाले पनि आन्तरिक पर्यटकहरुको चाप बढ्दै गएको हो ।
रमाउदै युवा जोडीहरु ।
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कारी(र्की)कोटको धार्मिक र ऐतिहासिक पक्ष रहेको छ । अन्वेषक, इतिहासकार, श्रद्धालुहरुका लागि कारी(र्की)कोट धार्मिक आस्था र अनुसन्धानको स्थल बन्न सक्छ । पर्वतका राजाहरुले कारी(र्की)कोटलाई सामरिक महत्वको रुपमा लिएको पाईन्छ । २०४५ सालको विजया दशमीमा यो हरफकार कारी(र्की)कोटमा पुग्दा कोटको उत्तर तिर केहि तल गराहरुमा दुई तिनवटा घरका भग्नावशेषहरु थिए । त्यस्लाई स्थानीयहरुले तत्कालीन भूरेटाकरे राजाहरुको दरबार भनेर चिनाएका थिए ।
पुरानो कारीकोट (२०४५)
त्यहाँ कोट घर छ (तस्वीर) त्यस्को नजिकै भीमेको स्थान भनिने घरको भग्नावशेष थियो र त्यसैको आसपासमा तरवार खुँडा खुकुरी खिया लागेको अवस्थामा रहेका थिए । दशैँमा कोट मन्दिरमा ठुलो मेला लाग्छ । श्रद्धालुहरु आफनो मनले चिताएको पुगोस भनेर भाकल गर्ने र बोकाहरुको बलि दिने प्रचलन रहेको छ ।
भिमेको स्थान (२०४५)
विसं १८४३ मा पर्वत राज्य नेपालमा विलय भएपछी कार्कीकोटमा नेपाल सरकारका सरदार, जर्णेल, कर्णेलले मुकाम गरेको स्थानीय बुढापाकाहरुले बताउछन् । विसं १८४५ मा बागलुङ कालिका देवीका खडका पुजारी रामचन्द्र पाडा (पुजारी)का नाममा सरदार अमरसिँह थापाले गरिदिएको सनद (तस्वीर)ले पनि यहि तथ्यलाई पुष्टी गर्छ । सनद (पत्र) मा मुकाम कार्किकोट लेखिएकोले यसको नाम कार्कीकोट भएको प्रमाणित हुन्छ ।
बागलुङ कालिका देवीका खड्का पुजारीको नाममा भएको सनद ।
अहिले यहाँ विभिन्न भौतिक संरचनाहरुको निर्माणक्रम जारी रहेको छ । कारीकोट मन्दिरको यसै फागुन महिनामा उदघाटन गरिएको छ । खड्क देवीको मन्दिर छ । कोटमा भएका हतियारहरुलाई व्यवस्थित गरिएको छ । नियमित पूजादिको चाँजो मिलाईएको छ । ऐतिहासिक, पूरातात्विक एवं धार्मिक महत्वको यस कारी(र्की)कोटको सबै मिलेर संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । नयाँ पुराना कोटहरु भन्दा कारीकोट सबै दृष्टिले उत्तम मानिएको छ । यसको गरिमा र महत्वलाई मेट्ने काम कतै कसैबाट हुनहुन्न र हुन दिनपनि हुन्न ।
तस्वीरहरु- बिदुर खड्का, सुवास पन्त, लक्ष्मी कुमाल, गौरी श्रीस ।
प्रस्तुति: बिदुर खड्का,
२०७३ फागुन २० ।